ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆိုပါ: WhatsApp / wechat: + 86-13805212761 / + 86-18705999280 / + 86 199 6195 7599
နှလုံးသား ၄,၀၀၀ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု! ဓာတုဗေဒစက်ရုံ ၂၂ ဦး သေ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
တရားခံ Yu XX၊ Hubei A Chemical Group Co. , Ltd (ယခင်က A Chemical Group) ဟုဥက္ကဌဟောင်းနှင့် Dangyang B Gangue Power Generation Co. , Ltd. (မှနောင်တွင် B Gangue Power Generation Company ဟုလည်းခေါ်သည်) ၏ဥက္ကchairman္ဌဟောင်း၊ အရာတစ် ဦး ကဓာတု Group မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ တရားခံ Zhang XX, အထီး ...
forwarders များနိုးနေကြတယ်! တိုင်းပြည်၏ကဏ္ sectors အားလုံးသပိတ်မှောက်! ဆိပ်ကမ်းကိုပိတ်ထားတယ်။ ကျဉ်းမြောင်းသောချန်နယ်ပျံ့နှံ့!
မကြာသေးမီကနယ်သာလန်၊ အိန္ဒိယ၊ သြစတြေးလျနှင့်ရုရှားတို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဆန္ဒပြမှုများအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိအဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကပြင်သစ်၌အကြီးစားသပိတ်မှောက်မှုကိုအပြည့်အဝစတင်ခဲ့သည်။ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွင်အနည်းဆုံးလူ ၈၀၀၀၀၀ ပါဝင်ခဲ့
ဆိုးဆိုးရွားရွား! ၈ ယောက်နှင့် ၂၆ ဦး ဒဏ်ရာရ! ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများ၌မတော်တဆမှု ၁၀ ​​ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဟာရပ်ရှရှိဓာတုဗေဒစက်ရုံတွင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်ယိုစိမ့်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးအလုပ်သမားခုနစ် ဦး ဆေးရုံတင်ရ Province.As ၏ 12:44 Janu အပေါ် ...
1,3-Dichlorobenzene နှင့်ပေါင်းစပ်နည်း CAS နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ CAS: 541-73-1
1,3-Dichlorobenzene သည်အနံ့ဆိုးသောအရောင်ရှိသောအရည်ဖြစ်သည်။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်၊ အရက်နှင့်အီတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ မျက်စိနှင့်အရေပြားကိုနာကျင်စေနိုင်သောလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆိပ်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းနိုင်သောကြောင့်ကလိုရင်း၊ နိုက်ထရိတ်၊ sulfonation နှင့် hydrolysis တုံ့ပြန်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အလူမီနီယမ်နှင့်ပြင်းထန်စွာဓါတ်ပြုပါသည်။
၁,၄၈၉ ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။ နိုင်ငံတော်သည်တရားမ ၀ င်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊
မတော်တဆမှုများမှနက်ရှိုင်းသောသင်ခန်းစာများနှင့် ၂၀၂၀ သြဂုတ်လတွင်သုံးနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုဗေဒပစ္စည်းများလုံခြုံစိတ်ချမှုပြင်ဆင်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏အဖြေမှထုတ်ပေးသောကော်မတီသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးတရားမ ၀ င်တရားမဝင် "သေးငယ်သောဓာတုပစ္စည်းများ" ပြင်ဆင်ခြင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ။
အင်္ဂလိပ်အမည်: 2,5-Dichlorotoluene English alias: Benzene, 1,4-dichloro-2-methyl-; NSC 86117; Toluene, 2,5-dichloro- (8CI); 1,4-dichloro-2-methylbenzene MDL: MFCD00000609 CAS နံပါတ် - 19398-61-9 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C7H6Cl2 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၆၁.၀၂၈၅ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - ၁ ။ ဂုဏ်သတ္တိများ - ကြားနေအရောင်မဲ့ ...
Biden မှဒေါ်လာ ၁.၉ ထရီလီယံထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အထည်အလိပ်ကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းသည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမြင့်တက်လာသည်
21-01-25 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ယခုအချိန်တွင် Trump သည်နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းကိုတရားဝင်ပြောခဲ့ပြီး Biden သည်တရားဝင်ရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းခံရသည်။ သူသည်ရုံးမတက်မီကပင်သူ၏စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနျူကလီးယားဗုံးနဲ့တူတယ်။ Biden ကို $ 1.9 ထရီလီယံရူးသွပ်သည့်ပုံနှိပ်ခြင်း! အစောပိုင်းကအမေရိကန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူ Joe Biden သည်ဒေါ်လာ ၁.၉ tr ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ဘွန်အက်စစ် 92-70-6 အကြောင်းအသေးစိတ်
အမည်: 3-Hydroxy-2-naphthoic အက်ဆစ် alias: CI Developer 20; CI developer 20 (Obs ။ ); CI Developer 8၊ 3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid; Bon Acid၊ beta-oxynaphthoic အက်ဆစ်; 2,3-Bon Acid၊ သန့်စင်ပြီး Bon Acid၊ 2-Hydroxy- 3-Naphthalene Carboxylic acid; 3-Hydroxy-2-Naphthslene Carboxylic acid; 3-Hydroxy-2 ...
အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘော Maersk သင်္ဘောပေါ်သို့ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ကွန်တိန်နာအမြောက်အများဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပျက်စီးခဲ့သည်။
လှိုင်းတစ်ချောင်းသည်မညှိတက်ဘဲအခြားတစ်ခုတက်နေပါသည်။ မကြာသေးမီလများအတွင်းမတော်တဆမှုအမျိုးမျိုး၊ ကွန်တိန်နာဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Maersk သင်္ဘောမှ Maersk Essen မှဖောက်သည်များအားအသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်အရောင် Fast သည်ဆင်းရဲသနည်း
ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အထည်အလိပ်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပုံနှိပ်နှင့်ဆေးဆိုးသည့်ဆေးဆိုးဆေးများကိုမည်သို့တိုးတက်စေရန်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးလုပ်ငန်းတွင်သုတေသနခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အထူးသဖြင့်အလင်းရောင်ရှိသောအ ၀ တ်အထည်များသို့ဓာတ်ပြုသည့်ဆိုးဆေးများ၏အလင်းအရှိန်မြန်မှု၊ အမှောင်နှင့် of များ၏စိုစွတ်သောပွတ်တိုက်ခြင်း ...
သတိပြုရန်နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ၃၃၀,၀၀၀ သည်ဒေဝါလီခံခြင်းခံရသည်။ သင်၏စုဆောင်းမှုအန္တရာယ်ကိုသတိပြုပါ။
21-01-19 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
လွန်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်“ ကပ်ရောဂါ” သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကုန်ဆုံးသွားပြီးစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကြီးမားသောအတက်အကျကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်အခက်အခဲများရှိတောက်ပသောအစက်အပြောက်များလည်းရှိသည်။ တရုတ်၏နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဈေးကွက်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ကပ်ရောဂါ၏အကြောင်းရင်း! များစွာသောဓာတုဗေဒကုမ္ပဏီများက၎င်းတို့မှာယူမှုကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ကုန်တင်ကုန်ချလိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီး၊ ကုန်ကြမ်းများတင်ပို့ခြင်းသည်ပြisနာဖြစ်သည်။
အတော်များများကဓာတုကုမ္ပဏီများမှအမိန့်ကိုယူပြီးရပ်တန့်! ကျေးဇူးပြု၍ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ နှစ်သစ်ကူး နေ့မှစ၍ အမျိုးမျိုးသောဓာတုဗေဒကုမ္ပဏီများသည်ကြိုတင်ထွက်ခွာရန်စာများပေးပို့ပြီးဖောက်သည်များအားပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများမဖြစ်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်အမှာစာများကြိုတင်ပေးပို့ရန်သတိပေးခဲ့သည်။
123456 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၁၁
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါကသင်၏အီးမေးလ် ceo@mit-ivy.com သို့မဟုတ် WhatsApp 008613805212761 ကိုချန်လှပ်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်မှုပြုပါမည်။စုံစမ်းရေး
စက်ရုံ：： Xuzhou City, Jiangsu Province, China
Whatsapp: +8619961957599 (စီအီးအို CEO ဆန်နီဝမ်)
Whatsapp: +8613805212761 (အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ အသီနာ)
အီးမေးလ် - ceo@mit-ivy.com